Amaqembu - BLI Isikole solimi eCanada
Phila isikhathi esihle kakhulu sempilo yakho
AmaqembuFunda, Hlola, Thola nokukhula
Izinhlelo zeqembu zingaba ngezifiso ngesicelo. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Isimo sokuzivocavoca kwezobuciko esivulekile24 / 7
Indlu yokuhlanza izingubo $ $
Uhlelo lwethu lokuhlala emakhaya luzonikeza abagibeli ithuba lokuzicwilisa emasikweni nasezilimini zaseCanada. Bazophila okwenzeka emndenini. Yonke imindeni yethu yokusingathwa ikhethwe ngokucophelela futhi kufanele ihlangabezane nenqubo yekhwalithi ye-BLI. Siqinisekisa ukuthi zonke izindlu zemindeni ezisingethwe zihlangabezana nezindinganiso zokuphepha nezenhlanzeko futhi sezithole inqubo eqinile yokukhetha.
Uma ama-campers ethatha uhlelo lwethu lwekhaya, ayoqeda usuku lwawo lwe-FLAP ngehora lesithupha ntambama bese elibangisa ekhaya ukuyodla isidlo sakusihlwa nomndeni wakho obamba ngalo ngokuhamba komphakathi.